“ဘွဲ့ တစ်ခုခုရထားပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိသူများအတွက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်အကိုင်/ပညာရေးလမ်းအကြောင်းများ” (ရန်ကုန်- မတ်လ ၁၆) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | Crown Education
HomeCrownAbout UsCROWN’S AWARDSStudent TestimonialsServicesUniversitiesStudy in HOLLANDStudy in MALAYSIAStudy in AUSTRALIAPre MASTERSStudy in UKStudy in USAStudy in SingaporeStudy in NEW ZEALANDGUIDE TO UK UNIVERSITIESStudy in THAILANDUseful InfoUnaccredited InstitutionsPathway ProgramsGlobal Assessment CertificateNCUK International Year OneGAC Pathway UniversitiesGAC in MyanmarNewsGalleryPhoto GalleryContact UsEDU EXHIBITION 2017FAQs “ဘွဲ့ တစ်ခုခုရထားပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိသူများအတွက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်အကိုင်/ပညာရေးလမ်းအကြောင်းများ” (ရန်ကုန်- မတ်လ ၁၆) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုဘွဲ့ရထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ( အဝေးသင်ဖြစ်ဖြစ်/UFLကပဲဖြစ်ဖြစ်/ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖြစ်/ကွန်ပျူတာဘွဲ့/ ဆရာဝန်ဘွဲ့/ သမိုင်းဘွဲ့ / ပထဝီဘွဲ့ / Physic/ Chemistry)တွေ…. ခုလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ …..ဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ?.❑ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူများ အနေဖြင့် စာတွေ့(၆) လ နှင့်စင်ကာပူရှိထိပ်တန်းဟိုတယ် ကြီးများတွင် လစာရ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့(၆)လပါဝင်မည့် Postgraduate Diploma in Tourism & Hospitality Managementကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်း❑ Engineering ၊ Manufacturing ၊ Industry စသော လုပ်ငန်းခွင်များ တွင်စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာများကို လုပ်ကိုင်ကြလိုသူများ အတွက် အချိန်တိုအတွင်းသင်ယူတက်ရောက်နိုင်မည့် Postgraduate Diploma in Engineering Management❑ လက်ရှိတွင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြ သူများ ၊ ဘွဲ့ရရှိထားပြီး အနာဂတ်ပညာရေး ကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်လေ့လာသင်ယူ လိုကြသူများအတွက် University of West ofScotland(UK) မှပေးအပ် မည့် Master of Business Administration (MBA) ဘာသာရပ်အကြောင်းတွေကို တစ်ဦးချင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။.ရန်ကုန်မြို့တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးပွဲ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■❑ နေ့ရက် - မတ်လ (၁၆) ၊ ကြာသပတေးနေ့။❑ အချိန် - နေ့လည်(၂) နာရီမှ (၄) နာရီထိ❑ နေရာ - CROWN Education Yangon Office မှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။.လာရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုတယ်ဆိုရင်တော့.....ဖုန်း ၀၁-၅၂၇-၈၃၈၊ ၀၉ - ၇၃၂-၇၃၂-၇၇၊ ကိုဆက်သွယ်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်.... User login